Original lesikhumba icala nge clip nensimbi tag Lambskin Isikhumba swivel holster for BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Original lesikhumba icala nge clip nensimbi tag Lambskin Isikhumba swivel holster for BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl
Akukona nje kuphela ivikela ifoni yakho kusuka kunoma iyiphi amathonya ezingezinhle zangaphandle, kodwa futhi iyehlisa amathuba nesenzakalo yabo. Inhlanganisela esiqinile isikhumba zensimbi. Q factor zokukhiqiza, ukuqina okukhulu. It isekela magnetic BlackBerry ubuchwepheshe.
Original lesikhumba icala nge clip nensimbi tag Lambskin Isikhumba swivel holster for BlackBerry 8100 / 8120/8130 Pearl — iyona isesekeli enokwethenjelwa kakhulu ukuvikela ifoni yakho. It hhayi kuphela ivikela ifoni yakho kusuka kunoma iyiphi amathonya ezingezinhle zangaphandle, kodwa futhi ngokuphawulekayo kunciphisa amathuba nesenzakalo yabo: sibonga clip eyizingqabavu ukuthi kuboshwa ekhoneni, ungakwazi njalo ngokuqiniseka ukugqoka idivayisi nabo, ngaphandle kokuzizwa iyiphi ukungakhululeki.
Case embozwe soft isikhumba esingokwemvelo phezu, impahla enhle, esiwusizo futhi isikhathi eside. Ingaphakathi Unamekwe lendwangu obucayi evimbela imihuzuko kanye ithambisa amagalelo futhi anakekele umzimba. Lambskin Isikhumba swivel holster eziklanyelwe Series 8100, kulandela ukuma smartphone inikeza Gap. Ezinhlangothini zakhiwa gum nokunwebeka, ukuvimbela esisuka umkhiqizo. Ifoni eqondiswa at the bridge ebanzi countersunk ukuyona magnetic esivula kwelinye motion, uma kunesidingo. Kancane mfushane engxenyeni engenhla ikuvumela ukususa ngokushesha smartphone yakho.
Ubuhle kulokhu kungenzeka imali energy ibhethri: ngaphakathi kukhona inzwa magnetic ukuthi kubangelwa ngokushesha nje ifoni kwaba ecaleni, ukuhlinzeka isikrini backlight futhi ikhiphedi Ilokhi. Ukuze kube lula isaziso, ungakhetha izinto ezahlukene ongazikhetha ifoni ukuba ikhale (vibration, ringtone, vibration + Ihubo), ngenkathi kwenzeka ucingo ngeke ngokuzenzakalelayo ukusebenzisa lolu hlelo akhethiwe umsindo, futhi ngaphandle kwalo — evamile.
Lambskin Isikhumba swivel holster — design personable ngokweqile. Inhlanganisela okuqinile kakhulu: lesikhumba soft and metal amakhaza (tag impahla) — ubukeka ezibizayo futhi umxhwele, ngokuphelele sikhulise isimo sakho se-umnikazi. Q factor zokukhiqiza futhi icocekile ezivuzayo: le-accessory zibekwe ngokuningiliziwe, futhi zilungele isikhathi eside inkathazo-free.
Original lesikhumba icala nge clip nensimbi tag Lambskin Isikhumba swivel holster for BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl, Black (Black) HDW-12715-001 ●